Ama-akhawunti we-WordPress cishe angu-24% kuwo wonke amawebhusayithi e-intanethi emhlabeni wonke. Bonaube nesiteji samahhala esiphezulu lapho wonke umuntu angasebenzisa futhi azuze - motorcycle valuation services. Ama-Plugins abo, umakhi we-DIY womsebenzi kanye nezinye izici zewebhu kwikhodi yabounikeze isiteleka esivulekile sabanini-zimabhizinisi abaningi kanye ne-blogger ukusetha amasayithi abo e-commerce. Noma kunjalo, abaduni bafika kulezi zingosi ngokufanayongendlela. Kukhona imizamo engaphezu kuka-94563 yokuzama ukushaya izingosi ze-WordPress njalo ngomzuzu. Lesi sibalo siza ngenxa yesikhulumi sabo esivulekile esibonisazonke izindlela. Ngenxa yalokho, i-WordPress ingabonisa isiteji esingavikelekile esingabaqashi abaningi abangayisebenzisa ukuze benze ezinye zezinto eziningi eziyingoziukuhlaselwa.